“Tisiisarra damma hin eegani….” Qeerroo Matakkal, Asoosaa, Wambaraa Irraa | QEERROO
Dr Girmaa Amanteen dhalata naannoo Beenishaangul Gumuz, Godina Matakkal kan ta’an, akkuma lammiilee Oromoo naannichaa biroo barumsa isaanii sadarkaa lammaffaafi olaanaa xumuranii naannoo isaaniitti dhufuun hojii argachuuf yaalii godhanii ture. Caaseffama chaarteraa bara 1983 A.L.H irraa kaasee uummanni Oromoo naannichaa sababaa Oromummaa isaaniitiin qofa mirgoota namummaa heerri mootummaa kaa’ee caalaatti dhokamuu jalqabe. Dhalataan Oromoo barate Naannicharratti akka hojii hin arganne, Afaan isaatiin akka hin baranne, akka hin dubbannee fi dhiibbaadhuma kanarraan kan ka’e akka godaanu godhamaa ture. Yeroo kana egaa Dr Girmaan dhiibbaa ilmaan Oromoorratti ta’u kana baqachuun gara naannoo Oromiyaa Shawaa bahaa deemuun carraa Hojii argatani.
· Yeroo itti Pirezidaantii Yuuniversii Haramaayaa turanitti Ilmaan Oromoo mirga uummata Oromoof falman, Caasaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo basaasuun diinatti dabarsee kennaa, ajjeesisaa fi Barumsa isaaniirraa ari’aa turaniiru;
· Yeroo itti mana maree bakka bu’ootaa turanis rakkoo fi hacuuccaa Uummata Oromoo naannoo itti dhalatan irra gahaa jiru dhiisanii, Dheebuu Aangoof qaban irraa kan ka’e Amanamummaa TPLFf qaban irraa kan ka’e akka isaa Wallaga bahaa, Aanaa Qeelloo bakka bu’uun filataman ajajamanii isaanis amanamummaan Uummata Oromoo ganuun TPLFf ergamaa turaniiru;
· Yeroo itti Itti gaafatamaa Interpiraayizii misooma Bosonaa ta’anii hojjetaa turanis Qabeenya Oromoo isa guddaa kan ta’e Bosona mancaasuun Abbootii qabeenyaa TPLF waliin ta’uun mancaasee garaacha dhuunfaa isaa guuttachaa tureera, Qabeenya uumamaa naannichaa garaa garaas mancaasuun faalama qilleensaaf saaxilee jira.
· Yeroo itti Uummanni Oromoo naannoo Beenishaangul Gumuz Matakkal, Wambaraa, Asoosaa, Kamaashii fi kaan inni keessatti dhalate Mirgi isaa caalaatti sarbamee, Ajjeefamee, Hidhamee, Ari’atamee rakkoo kana keessaa bahuuf qabsaa’aa fi wawwaataa turetti Aangoo irra jiraatuyyuu Biyyaa fi Uummata isaatti Dugda kennee tureera;
· Yeroo itti Mootummaan TPLF Uummata Oromoo naannichaa Xinneessaa, Jibbaa, Tuffachaa fi Uummata naannichaa kaan waliin walitti buusaa turte dhiibbaa tokkollee hin goone; dirqama lammummaa isaaniis hin bane akkasumas Godinaalee Kamaashii naannoo garaa garaatti walitti Bu’insi Uummata Oromoo fi Saba naannichaa gidduutti godhamee dhumaatii ta’e keessaa harka qabu.
ü Uummanni Oromoo naannichaa Mirga Heerri mootummaan biyyattii kaa’een Mirgi abbaa biyyummaa, Mirga Afaaniin Barachuu, Aadaa Ofii kabajuu, Mirga Hiree ofii ofiin murteeffachuufaa akkuma lammiilee biyyattii biro kabajamuufii qaba. Kun immoo kan ta’u Yoo refoormiin heera Mootummaa Naannoo Beenishaangul Gumuz qoratamee yoo jijjiirame ykn Haareffame Qofa;
ü Uummanni Oromoo naannichaa Oromummaa isaatiin qofa sobaan maqaa adda addaa itti maxxansuu yakkuun, Hidhuun, Ajjeesuunii fi Godaansuun hafuu qaba. Warreen yeroo ammaan kana sababaa filannoo MM waliin wal qabatee gammachuu ibsannaan yakkamanii mana hidhaa naannichaa garaa garaa keessa jiranii fi Sabboontonni Mana hidhaa Federaalaa keessatti sababa tokko malee hafanii jiran Haal duree tokko malee hatattamaan hiikamuu qabu fi
ü Harcaatuun Caaseffama Dulloomaa Dh.D.U.O naannichaa Duras Bu’aa buusaa hin turre Diigamuu fi Haareffamee dhaloota haaraan bakka bu’uu qaba.
ü Qaamni Rakkoo Uummata Oromoo naannichaaf Gitu, mariisisuu fi Furuu qabu Gantuu fi harcaatuu Dh.D.U.O duraanii utuu hin taane, Mootummaa Naannoo Oromiyaa fi Muummicha Ministeeraa ta’uu mala.